Wasaaradda Deegaanka Somaliland Oo Hoos-hoos u Ogolaatay in la Daldasho Duur-joogta Waddanka | Salaan Media
Wasaaradda Deegaanka Somaliland Oo Hoos-hoos u Ogolaatay in la Daldasho Duur-joogta Waddanka
Hargeysa:14-Sep-2013(SM)-Sida ay sheegayaan warar hoose oo ku dhaw wasaaradda Deegaanka iyo horumarinta Reermiyiga Somaliland, waxa jira heshiisyo hoose oo ay wasiirka wasaaradaasi shukri xaaji ismaaciil Baandare ku fasaxday Ganacsato gaar ah inay dalka ka gurtaan ugaadh hor leh.
Inkastoo ay wasiirku toddobaadkii ina dhaafay dhexdiisii uun ku dhawaaqday inay joojisay Guud ahaanba ugaadhsigii ajaanibka iyo muwaadiniinta is wataa ku hayeen Duur-joota dalka, haddana, waxa dhacday inay wasiirku hoosta ka bixisay Ogolaansho cusub oo la xidhiidha in dalka laga rarto ugaadh kale.
Xilli Maxamuud Ibraahim Maxamed (Guri barwaaqo)uu waraysi gaar ah siinayey war-fidiyeen ka hawlgala warbaahinta dalka oo raadinayey warar la xidhiidha mamnuucidda wasiirku ku soo rogtay ugaadhsiga lagu hayo Duur-joogta dalka, ayaa waxa dhacday in masuulka loo keenay Fayl weyn oo ay ku qoran tahay in ugaadhsiga loo fasaxay dad kale oo gaar ah kaas oo masuulkan looga baahnaa inuu dhinaciisa saxeexo.
Masuulkan ayaa si aad ah uga cadhooday faylkan sida qarsoodiga ah loogu fasaxayo gurashada ugaadhsiga dalka, waxana uu in badan la murmay shakhsigii u soo gudbiyey faylkaas oo uu u sheegay in hore loo joojiyey arrintan meesha ku qoran balse markii dambe waxa ay dani ka wadi wayday inuu qalinka ku duugo oo uu saxeexo.
Masuulka oo wariyihii markaas dhacdadaasi dhacday joog-joogga u ahaa wax ka weydiiyey caqabadaha ay wasaarad ahaan kala kulmaan kooxaha carbeed ee ugaadheenna sida gaarka ah u daneeya ee ay fasaxa siiyaan, “carab baa noo timaadda oo intay saddex cisho oo fasax ah qaataan haddana aan fulinin heshiiskii ay wasaaradda la galeen oo waxa ay doonaan sameeya oo Baasas iyo shimbiro kale oo ay wataan ku laaya shimbiraheena kuna tababarta, carabina waysku wada egtahay oo lama kala yaqaano.” Ayuu yidhi maxamuud guribarwaaqo.
Saxeexan cusub ee ay wasiirku ku fasaxday in la gurto ugaadha dalka, ayaa dhabar jab iyo wacad-fur ku ah warkii ay saddex cisho ka hor warbaahinta ka sheegtay inay mamnuucday ugaadhsiga duurjoogta dalka, waxana wali aan war rasmi ah iyo faah-faahin midna laga haynin sababta ku kalliftay wasiirka inay hoos hoos u fasaxdo Ugaadha dalka.
Sidoo kale sarkaalkan ka tirsan wasaaradda Deegaanka Somaliland, ayaa sheegay inay adag tahay in la kantaroolo carabta loo fasaxo ugaadha dalka, maadaama meelaha ay tegayaan ay yihiin baadiye fof fog, taas oo keentay inay qofka shaqaalaha wasaaradda ah ee lagu daro si uu dabogal ugu sameeyo ay laaluush siiyaan si aanu uga warramin xad-gudubka ay ku sameeyaan heshiisyada lala galo.
Wasiirka wasaaradda Deegaanka Somaliland oo markii aanu warkan helnay aanu isku daynay inaanu wax weydiinno ayaanay noo suurto gelin, waxana saraakiil kale oo wasaaradda ka tirsan oo aanu wax weydiinay ka cudur daarteen inay faahfaahin bixiyaan.
Sidoo kale waxa looga fadhiyaa wasiirka cusub ee wasaaradda Deegaanka Somaliland inay u illimo bixiso sababta keentay inay hoosta ka fasaxdo Ugaadhsigii ay saddex cisho ka hor ku dhawaaqday inay joojisay, waxana haatan jira warar badan oo sheegaya in la arkay kooxo ugaadhsanaya Ugaadha waddanka oo waraaqo fasax ah ka sita wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta reer miyiga.